Fampihavanam-pirenena : 75 andro no fifantenana ireo mpikamban’ny FFM vaovao | NewsMada
Fampihavanam-pirenena : 75 andro no fifantenana ireo mpikamban’ny FFM vaovao
Manana fetra ny fotoam-piasan’ny komity mpifantina izay ho mpikamban’ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM) amin’ny endrika vaovao. 75 andro, roa volana sy tapany, manomboka amin’ny fampahafantarana ny didim-panjakana momba azy ireo izany, araka ny fanazavan’ny avy amin’ny komitin’ny manampahaizana namolavola ny lalàna mifehy ny fampihavanam-pirenena, Maka Alphonse.
Hanao sivana ireo olona 22, iray isaky ny faritra, ny komity mpifantina izay vao notendrena tamin’ny filankevitry ny minisitra farany teo. Alohan’izay, hanao fiantsoana amin’ny firotsahan-kofantenana izay olona terem-panahy sy manam-paniriana ho amin’izany ny komity.
Araka izay faritan’ny komity hanao sivana ny fomba fiasany sy ny amin’izay antontan-taratasy ilaina amin’ny firotsahan-kofantenana.
Ilaina ny olona manana traikefa amin’ny fampihavanana
Araka ny voalazan’ny lalàna, olona tsy mbola nigadra, ohatra, izay mpikamban’ny FFM amin’ny endriny vaovao izay, 40 taona no ho miakatra, manana traikefa amin’ny fampihavanana… Manao ny fiantsoana amin’ny firotsahan-kofantenana ny komity mpifantina ao anatin’izay 75 andro izay. Vita izany, manao ny fijerena ireo antontan-taratasy izy ireo. Misy ny masontsivana araka ny voalazan’ny lalàna ao amin’ny And. 12 sy And, 16 ary ny And. 17 amin’ny lalàna lah. 2016-037.
Eo koa ny fanadihadiana ara-moraly ireo olona voasivana, ary manome ny olona 22 any amin’ny filankevitry ny minisitra ny komity. Tompon-toerana ireo olona 22 ireo, fa misy mpisolo toerana 22 ihany koa. Tsy manan-kotenenina amin’izay lisitra atolotry ny komity mpifantina ny filankevitry ny minisitra, fa mamoaka didim-panjakana ny amin’ny fahitana izany.
Homen’ny lalàna fahaleovantena tanteraka ny komity mpifantina amin’ny fanolorana ireo ho mpikamban’ny FFM vaovao. Mifototra tanteraka amin’ny fampihavanam-pirenena ny fanendrena azy ireo, izay dingana farany amin’ny fametrahana ny FFM.